माओवादी र एमालेका पुरानै उम्मेदवार, काङ्ग्रेस अलमलमा
माओवादी र एमालेका पुरानै उम्मेदवार, काङ्ग्रेस अलमलमामाघ १८, काठमाडौं (अस)। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एमाओवादी र एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारको निर्णय हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसले भने केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन सकेको छैन । मङ्गलवार बेलुका अबेलासम्म पनि काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने विषयमा निर्ण...
'सेना समायोजनमा भट्टराईको विरोध पुरानै’
'सेना समायोजनमा भट्टराईको विरोध पुरानै’माघ १७, काठमाडौं (अस)। लडाकूलाई विशेष समितिमा ल्याउने कार्य सकिएपछि बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा एमाओवादी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईले लडाकू समायोजनविधिको खुलेरै विरोध गरेका छन् । उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको विरोधलाई सञ्चारमाध्यमले खासै महत्त्व नदिए पनि यसको दीर्घक...
प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि माओवादीसँग परामर्श
प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि माओवादीसँग परामर्शमाघ १६, काठमाडौं । नयाँ संविधान लेखन कार्यमा देखिएका विवादित विषय र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन कार्यलाई लिएर संवैधानिक समितिले आइतवार एकीकृत नेकपा (माओवादी) सँग परामर्श गरेको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा भएको सो परामर्शका क्रममा सहमतिका विष...
'समयानुकूल शिक्षा आवश्यक’
'समयानुकूल शिक्षा आवश्यक’माघ १५, काठमाडौं (अस) । राष्ट्रपतिको समेत कार्यभार सम्हालेका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले राष्ट्रको विकास र दिगो शान्तिका लागि समयानुकूल शिक्षा आवश्यक भएको बताएका छन् । 'देश विकासका लागि उपयुक्त, समयानुकूल र सही शिक्षा नीतिको खाँचो छ,' निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेश...
''ठोस विचार ग्यास व्यापार'' - पशुपतिशमशेर ज.ब. राणा
राजनीतिज्ञको व्यवसाय - शकुन्तला जोशी''ठोस विचार ग्यास व्यापार'' - पशुपतिशमशेर ज.ब. राणाअध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा कुशल व्यवस्थापकमा समयको महत्त्व बुझेर आवश्यकतानुसार तुरुन्त निर्णय लिन सक्ने खुबी हुनुपर्छ भन्छन् पशुपतिशमशेर राणा । 'व्यवसायमा होस् या राजनीतिमा, समूहलाई वशमा राखेर काम...
फेरि बहुमतीय प्रधानमन्त्री
फेरि बहुमतीय प्रधानमन्त्रीमाघ १२, काठमाडौं (अस) । अब सरकार गठनको प्रक्रिया बहुमतीय प्रणालीतर्फजाने निश्चित भएको छ । सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिएको समयसीमा बुधवार राति सकिएपछि यस्तो स्थिति सृजना भएको हो । बिहीवार बिहान राष्ट्रपति डा. यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६...